राम्रो व्यक्ति बन्नुको महत्त्व - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट जेआर कुक | नोभेम्बर 30, 2019 | व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक सोच, आत्म-सुधार |0|
1 म को हुँ र तपाईंले किन सुन्नुपर्छ? राम्रो प्रश्न
1.1 राम्रो व्यक्ति बन्नको लागि थाहा पाउनु भन्दा बढी लिन्छ, यसले कार्य गर्दछ
2 दुई प्रकारका मानिसहरू
2.1 त्यसो भए हामी अगाडि बढ्न के गर्न सक्छौं?
तपाईंको जीवन बासी भएको जस्तो तपाईंले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ? मलाई थाहा छ कि मसँग निश्चित छ। यो सामान्यतया तब भयो जब मलाई कुनै नयाँ कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्दैन। मैले सुधारिएको कुनै चीज देखिन।
आज म कसरी योबाट बच्ने, र राम्रो व्यक्ति बन्ने महत्त्वको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु।
म को हुँ र तपाईंले किन सुन्नुपर्छ? राम्रो प्रश्न
यदि तपाईं म को हुँ भनेर थाहा छैन भने, मेरो नाम जेआर कुक हो र म एक दार्शनिक हुँ। म मूलरूपमा क्यालिफोर्नियाबाट आएको हुँ, र हाल मेरो विदेश दृश्य विस्तार गर्न विश्व भ्रमण गर्दैछु।
म पुस्तकहरू मार्फत आफ्नै रचनाहरू लेख्छु, र इतिहासमा दार्शनिकहरूको कार्यहरूको अध्ययन गर्दछु विकास गर्न जुन व्यावहारिक रूपमा उत्तम काम गर्दछ।
म यी सबै मेरो वेबसाइटमा सित्तैमा साझेदारी गर्दछु, स्पष्ट रूपमा पुस्तकहरू बाहेक। सत्य र ज्ञानको खोजीमा मैले आफ्नो जीवन व्यतीत गरें।
कसरी राम्रो व्यक्ति बन्ने
मैले आफ्नो जीवन एक उत्तम व्यक्ति बन्ने प्रयासमा बिताएको छु, तर मलाई लाग्थ्यो कि यो गन्तव्य हो।
म अब विश्वस्त छु कि राम्रो व्यक्ति हुनु भनेको एक यात्रा हो। यो यात्रा हो जुन समर्पण र निरन्तर व्यायामको आवश्यक पर्दछ।
तपाईं मेरो यात्रा सुनेर मेरो अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ दर्शन वेबसाइट.
यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईंले यो गुमाउनुहुन्छ
यो कसरी मिल्दोजुल्दो छ यदि एक व्यक्ति2हप्ता सम्म ओछ्यानमा पल्ट्यो भने, तिनीहरूको शरीर शोष शुरू हुन्छ। जब तपाईं आफ्ना गुणहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईंको चरित्र हराउन थाल्छ।
त्यो कहाँ छ व्यक्तिगत विकास भित्र आउँदछ। म यो विश्वास गर्दछु कि यो जीवनको सब भन्दा महत्वपूर्ण तत्वहरु मध्ये एक हो, किनकि यो जग हो जुन अरू सबै चीजमा निर्भर गर्दछ।
यसको बारेमा सोच्नुहोस्, यदि मैले मेरो नैतिकतामा स्लिप गर्न थालें भने, म कस्तो साथी, बुबा, वा प्रेमी बन्ने क्षमता पाउनेछु?
म अरूको अनुकरण गर्न कस्तो रोल मोडेल हुँ? म कस्तो प्रकारको दर्शन हुनेछ?
राम्रो व्यक्ति बन्नको लागि थाहा पाउनु भन्दा बढी लिन्छ, यसले कार्य गर्दछ
यसैले म धेरै वर्षहरुमा निरन्तर व्यक्तिगत विकासमा व्यस्त छु। स्पष्टतः एक दार्शनिकको रूपमा, म बौद्धिक रूपमा जान्ने थिए कि राम्रो व्यक्ति के हो, तर व्यक्तिगत विकास गर्नु अघि कहिलेकाँही मैले यसलाई मूर्त रूप दिएन।
ज्ञानको कार्यान्वयन नगरी राम्रो ज्ञान के हो? यो गर्नका लागि सही कुरा "थाहा पाउँदा" राम्रो लाग्न सक्छ, तर यसले सही कुरा गर्दा अझ राम्रो महसुस गर्दछ।
दुई प्रकारका मानिसहरू
यदि तपाईं विश्वमा ध्यान दिनुहोस्, तपाईं दुई प्रकारका व्यक्तिहरू देख्नुहुनेछ। पहिलो प्रकार तिनीहरू हुन् जसले कुनै विषयमा कुरा गर्दैनन् यदि उनीहरूको बुद्धिले सही ज्ञान प्रदान गर्न शक्ति प्रदान गर्दछ भने।
ती साधारणतया ती हुन् जसले आफ्ना दिनहरू सिक्न, सत्यको पछि लाग्ने, र कार्यवाही गर्ने क्रममा बिताउँछन्। तिनीहरू दार्शनिकहरू हुन्, र तिनीहरू ती हुन् जसले सिकाई, व्यक्तिगत विकास र विकासलाई महत्त्व दिन्छन्
त्यसोभए तपाईंसँग दोस्रो वर्ग छ (जुन प्रायः कुरा गर्ने गर्दछ)। यी ती हुन् जसले सत्यलाई पछ्याउँदैनन्, तर जे भए पनि तपाइँलाई यसमा उनीहरूको राय दिन इच्छुक छन्।
तिनीहरू आफ्ना भावनाहरूको साथ उनीहरूको सोचविचार गर्छन्। म उनीहरूलाई भ्रमित र धोका पाएको वर्ग भन्छु, र तिनीहरू दयाको पात्र छन्। तिनीहरूले उपहास वा उपहास गर्नु हुँदैन।
तिनीहरू प्रकाशको लागि नेतृत्व गर्न को लागी सख्त छन्। एकमात्र चुनौती यो हो कि तपाइँ तिनीहरूलाई बल दिन सक्नुहुन्न। व्यक्तिहरू तयार हुँदा मात्र आउँछन्, र केहि पनि कहिले गर्दैन।
त्यसो भए हामी अगाडि बढ्न के गर्न सक्छौं?
पीडी क्याफेमा मैले यो लेख लेखिरहेको छु भन्ने कारण विशिष्ट कारण हो। आज म तपाईंलाई संसारको दार्शनिक वर्गको भाग हुन आमन्त्रित गर्न चाहन्छु।
यहाँका व्यक्तिहरू निजी विकास क्याफेमा छन्। म तपाइँलाई सोध्छु कि तपाइँ प्राय: फिर्ता जाँच गर्नुहोस् र मेरो लेखहरू कसरी व्यक्तिगत दार्शनिक वर्गको समाजको दार्शनिक वर्गमा सामिल हुने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित छ।
यदि तपाईं आज सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो चरित्र सुधार गर्न केहि गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईं एक आदर्श चरित्र तपाईं के हो भनेर स्पष्ट हुन सक्छ।
चरित्रको सूची लेख्नुहोस् जुन परम मानव अधिकारमा छ। यी तपाईंको लक्ष्यहरू हुनेछन्।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा छनौट गर्नुहोस्, र यसलाई आज मूर्त रूप दिन राम्रो गर्नुहोस्।
यसलाई जुत्ताको नयाँ जोडीको रूपमा राख्नुहोस्, र यससँग वरिपरि हिंड्नुहोस्।
अर्को समय सम्म, बढिरहनुहोस्।
चियांग माई थाईलैंडमा लेखिएको
पछिल्लो5 सुझावहरू तपाईंको किशोरीलाई नाग बिना नै उत्प्रेरित गर्न को लागी
अर्को5 निजी प्रशिक्षक कसरी बन्ने भन्ने बारे राम्रो सल्लाह
JR कुक एक उद्यमी, संगीतकार, वेब विकासकर्ता, र दार्शनिक हो। मूलतः क्यालिफोर्नियाका, उनले धेरै विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा हासिल गरे। सत्य र ज्ञानको अव्यवस्थित दर्शनको आत्म-क्युरेट गर्न उसले विद्यालय छोड्नुभयो। जेआरले आफ्ना दिनहरू अनलाइन jrcookofficial.com मा काम गर्दछ र जीवनलाई असर गर्न डिजाइन गरिएको लेख प्रकाशित गर्दछ।
Easy सजिलो तरीका लगातार सिक्नेको आदत सिर्जना गर्ने
भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यो सिर्जना गर्न हो।
- पीटर एफ। ड्रकर